ဆေးရှဲဓာတ်ပုံရီးရဲလ်ရှုခင်း Pack ကို DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 557 ကို MB
downloads ရယူရန္ 74 090
အချို့သောအားလပ်ရက်လိုအပ်ပါသလား? ထိုဆေးရှဲအားဤအံ့သြဖွယ်ကို virtual ခရီးစဉ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားကြည့်ပါကသင်ဘာမျှမကုန်ကျ! seychelles အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင်တည်ရှိပြီး, 115 ကျွန်းတစ်ကျွန်းစုနှင့်အာဖရိကတိုက်ကြီးမှပူးတွဲပါ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်တကျွန်းတနိုင်ငံအရပ်အဓိကကျွန်းမာဟေးသောပြည်နယ်သို့အုပ်စုဖွဲ့နေကြပါတယ်။ ဇွန်လ 29, 1976 ကတည်းကဆေးရှဲဗြိတိသျှဓနသဟာယနှင့် la Francophonie တွင်အတွင်းလွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
HD ကို photoreal ပုံရိပ်တွေအတွက်လှပသောရှုခင်း Diaphenous အားဖြင့် LOD16 resolution ကို 60cm / pixel ကင်မရာ, အဆိုပါအထုပ်အသစ်တစ်ခု watermask အခြေခံ autogen နှင့်ညဉ့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသစ် shorelines ပါဝင်သည်။
Platt ကျွန်း (ဗားရှင်း 2), Assumption ကျွန်း Astove ကျွန်းငှက်ကျွန်း, သမင်ကျွန်း Coetivy ကျွန်းက Denis ကျွန်း Desroches ကျွန်း, Fregate ကျွန်း Poivre Atoll, Remire ကျွန်းစိန့်ယောသပ်သည် Atoll &: သင်အောက်ပါနေရာများမှသွားနိုင်ပါတယ် : D '' Arros ကျွန်းစိန့် Pierre ၏ကျွန်း။
သငျသညျ Platt ကျွန်း (FSPL) မှသင်၏အားလပ်ရက်စတင်နှင့်အခြားကျွန်းများတအောင်နိုင်, ဥပမာဘို့သင့်ကိုငှက်ကျွန်း seabirds များအတွက်ဆိပ်သောကာကွယ်ဧရိယာမှ 238klm ရှိပါတယ်ကိုယ်ကသာအနည်းငယ်ဘန်ဂလိုမှနေရာဖြစ်သည်, အုန်းသီးအာရှရပင်များနှင့်ဖြည့်စွက်နိုင် ကျွန်းပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ 112 မျိုးစိတ်များ၏ဘဲလေးစောင့်ကြည့်ဖို့တစ် belvedere သို့။
အားလုံးကိစ္စများတွင်, သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အရာများစွာကိုရှိပါတယ်, ပျင်းမရလိမျ့မညျ!
ဤအနေရာများများအတွက် ICAO codes တွေကို:
Platt ကျွန်း = FSPL Cerf ကျွန်း = FSCI Fregate ကျွန်း = FSSF စိန့် Pierre ၏ကျွန်း = FSSP
ယူဆချက်ကျွန်း = FSAS Coetivy ကျွန်း = FSSC Poivre Atoll = FSPO
Astove ကျွန်း = FSSA က Denis ကျွန်း = FSSD Remire ကျွန်း = FSSR
ငှက်ကျွန်း = FSSB Desroches ကျွန်း = FSDR စိန့်ယောသပ်သည် Atoll & D'Arros ကျွန်း = FSDA
Platt ကျွန်း (image ကိုဂြိုဟ်တု Google Earth ကို)
Platt ကျွန်း (FSX image ကိုလေယာဉ်ပျံချဉ်းကပ်မှု)
သတိပြုရန်ကြီးမားတဲ့ဖိုင် 556 ကို MBထိုသို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဥပမာ (အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်ရှိသည်ဖို့ဖမ်းဆီး၏အချက်မှာခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကို download accelerator software ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြု FlashGet).
Author: Diaphenous အားဖြင့်